South Asia and Beyond: सीके राउतलाई रिहा गर!
सीके राउतलाई रिहा गर!
देश र समाजका शत्रुहरुको सुचीमा एक, दुई र तीन स्थानमा आफैं पर्ने नैतिकता टाट पल्टिसकेका मन्दबुद्धिहरुले समाजको ध्यान अन्यत्र मोडेर आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउन सिके राउतलाई एउटा वहाना बनाएको मेरो ठम्याइ छ । यति सरल सत्य नबुझेर युवाहरुको एउटा जमात यस्तो कुरा गदैछ मानौं नेपालका तमाम समस्याको जड खाली सिके राउत नामको एउटा व्यक्ति हो जसको बलि चढाउने हो भने चमत्कारपूर्ण नेपाल एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम र समृद्ध देश बन्छ । योभन्दा भ्रामक कुरा केही हुन सक्दैन ।
सीके राउतका बारेमा केही नबोल्ने निश्चय गरेको थिएँ । आलोचनाका डरले हैन ब्लगको दशैं विशेष अंकको व्यस्तताले गर्दा । तर उनी अनशनमा बसेर नाजुक हालतमा रहेको समाचार आएसँगै चुप रहन सकिएन ।
शुरुमा लागेको थियो, सरकारले नगर्नुपर्ने पक्राउ गरिहाल्यो, गल्ती महसुस गरेर केही दिनमा छाडिदिइहाल्नेछ । यसबीच जो जति बोले बोले, यसको दीर्घकालीन प्रभाव केही हुने छैन ।
तर मामला बिस्तारै गम्भीर भएर जाँदैछ ।
सरकारले उनलाई पक्रेर जानी नजानी त्यही गर्यो, जुन रणनीतिक रुपमा उनी चाहन्थे । मधेश नै अलग गर्ने उद्देश्य राखेको मानिसलाई केही दिन वा महिनाको जेलनेल भोग्नु भनेको केही पनि हैन । कुनैबेला बाल ठाकरेको शिव सेनाले आउटलुक पत्रिकाका लागि जे गरेको थियो, हाम्रो सरकारले त्यही गर्यो ।
आउटलुकको पहिलो अंक आउँदा त्यसले इण्डिया टुडेजस्ता स्थापित पत्रिकालाई टक्कर दिने सम्भावना शुन्यप्रायः थियो । बलेको आगो ताप्ने मिडिया संसारमा फलानोले नयाँ पत्रिका खोल्यो भनेर त्यो तत्काल पढिदिने र विज्ञापन दिन जाने नगण्य हुन्थे । तर त्यो अंकमा प्रकाशित कश्मिर उपत्यकाको सर्वेक्षणलाई लिएर शिव सेनाले पत्रिकाका केही प्रति जलायो । पत्रिका रातारात भारतको राष्ट्रिय सञ्चार जगत्मा हिट छवि लिएर उदायो । पत्रिकाका संस्थापक सम्पादक विनोद मेहताले भनेका छन्ः बाल ठाकरेले आउटलुकका लागि अघोषित सर्कुलेशन म्यानेजर अथवा बिक्री व्यवस्थापकको काम गरिदिए ।
त्यसयता आउटलुकले पछि फर्केर हेर्नु परेको छैन ।
सिके राउतको त्यस किसिमको पुनरोदय होला वा नहोला उनका भावी गतिविधि र चातुर्यमा पनि भर पर्ने कुरा हो तर सरकारले आफ्नो तर्फबाट उनका लागि जे सक्थ्यो त्यो गरिसक्यो ।
जब समाजमा एउटा तहले मात्र हैन, सबैले बाटो हराउँछन्, अहिलेको पाकिस्तानको जस्तो स्थिति उत्पन्न हुन्छ । प्यारानोइड सिजोफ्रेनिया नामक असाध्य मानसिक रोग लागेका एक मानिसलाई ब्लास्फेमी अर्थात् धर्म निन्दाका लागि दोषी ठहर्याएर जेल लगियो, त्यहीं उनको हत्या गर्ने प्रयास स्वरुप गोली हानियो । के बोलें भन्ने पत्तो समेत नपाउने र अन्यत्र भए निःशुल्क मानसिक अस्पतालमा उपचार पाउने उनी अहिले पाकिस्तानमा मृत्युदण्डको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।
त्यसै पनि एउटा अनशनकारीको हत्याको जिम्मा लिइसकेको अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने जे हो, त्योचाहिं नगरेर बाँकी सबै गर्दैछ । आज गुण्डागर्दीकै भरमा सरकारी ढुकुटीको अरबौं लुट्नेहरुले के देश र समाजलाई क्षति पुर्याएका छैनन्? सडक र साधनको बेहाल हुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने सरकारले त्यसै कारणले हुने दुर्घटना र मानिसको मृत्यूको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन?
समस्याको एउटै निकास छः उनलाई तुरुन्त निःशर्त रिहा गरेर आफ्नो कल्पनाको उडान भर्न दिने । सभ्य समाजले गर्नु पर्ने नै त्यही हो । हालै चीनले उइघुर जातिका मानिसको पक्षमा बोल्यो र लेख्यो भन्दैमा एउटा सम्मानित प्राध्यापकलाई आजन्म कारावास सुनाएको बाटो वा पाकिस्तानमा मोहम्मद अस्घर नामका मानसिक बिरामीलाई पहिले गोली हानेर अब मृत्युदण्डको प्रतिक्षा गराएको बाटो नेपालका लागि किमार्थ जायज हैन । राज्यले आज उदारता देखायो भने बरु भोलि नेपाल टुक््रयाउन हिंड्नेहरु त्यो बाटोबाट फर्कलान् तर राज्य जति तिनको पिछा पर्छ, ती त्यति बलिया हुँदै जान्छन् र राष्ट्रियताको विषयमा त्यति नै फुकाउन नमिल्ने गाँठो पर्छ । कुनै न कुनै बिन्दुमा नफूकेको गाँठोलाई काट्नुपर्ने हुन्छ ।
Next article: एमालेकरणबारे थप केही कुरा
Labels: CK Raut, nationality, Nepal